5 Best Places Iji Rie Ice Ude Na Europe | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best Places Iji Rie Ice Ude Na Europe
5 Best Places Iji Rie Ice Ude Na Europe
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Britain, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Train Travel Switzerland, Zụọnụ Ndụmọdụ, Train Travel UK, Travel Europe
(Emelitere ikpeazụ On: 18/09/2020)
Ndị na ndidi kechioma gaa Europe mara ụtọ, na-uche nke njem na ọ na-enye. Ejegharị ejegharị na Europe nwere ike ime ka ndụ gị na otutu ụzọ. si asụsụ, mma nlegharị anya, na akụkọ ihe mere eme mma oriri na i nwere ike ịhụ azụ n'ụlọ. Ndị na-nwere otu ụtọ eze maka ice ude ga-enwe ihe dị ịtụnanya. Dị iche iche na ice ude parlors ofụri Europe na-enye otu ihe gbawara nke kediegwu flavors. Ka emechara, ice ude bụ n'ụzọ zuru okè na-anọdụ ala azụ na ndò ma zuru ike mgbe ogologo ụbọchị nke ịgagharị a obodo. Ọ bụrụ na ị na-eme njem site Europe na ndị na-ice ude n'anya, anyị emeela anyị akwa ahụmahụ na-eme njem site Europe na-etinye ọnụ a ndepụta n'ihi na ị. Ya mere, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ebe kasị mma iri ice ude na Europe.
Isiokwu a na-dere ịkụziri banyere Train Travel na e mere site Zọpụta A Train ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na The World.
Ebe Iji Rie Ice Ude Na Italy?
Italy bụ ma ama n'ihi na ya ịhụnanya nke ndụ na na-atọ ụtọ nri. Ha ice ude yiri ka ikpokọta abụọ. Ọtụtụ ice ude hụrụ ekweta na unu na-adịghị biri ruo mgbe i detụrụ a scoop nke ezigbo Italian gelato. The ọgaranya flavor na udidi ndị doro anya na-egosi na ice ude e mere site a onye na bụ omiiko banyere ha craft. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ị kechioma na-abịa gafee a ọma ice ude ebe.
dị ka mmiri ara
Rome bụ n'ụlọ ka onye nke kasị mma ice ude parlors na Europe, dị ka mmiri ara. The obodo jupụtara ice ude hụrụ. Ebe nseta nke ndị mmadụ na-ekpori ndụ gelato bụ ahụkarị. Otú ọ dị, na a obodo na-apụghị ịgụta ọnụ gelato ụlọ ahịa, onye guzo dị ka a zoro ezo mkpuru that any gelato lover needs to visit. Ọtụtụ ndị njem nleta na obodo enubata Bịa Il latté. Gịnị nwere ike ime ka ha ice ude otú pụrụ iche i nwere ike ịjụ? Firstly, ọtụtụ ndị na-enwe ndị ọgaranya na-atọ ụtọ flavors ha na-enye. Ha na-akwadebe ha gelato kwa ụbọchị na-eme ka ojiji nke eke Efrata. Ha ice creams bụ ọgaranya na creamy, dị ka aha na-atụ aro. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe Bịa Il latté n'aka, ị ga-enwe obi ụtọ ịmata na ọ sụgharịta ka “dị ka Mmiri ara ehi”. Ọbụna ndị kpọrọ mmiri ara ehi asị nwere ike iri ụtọ mmiri ara ehi na-enweghị mmiri ara ehi. The uto bụ ịtụnanya. Nke abuo, ndị mmadụ ife ikuku nke shop. Ọ na-agụnye nke kachasi mkpa na obi na-adị nke Rome.
Milan ka Rome Ụgbọ oloko
Florence na Rome Ụgbọ oloko
Pisa ka Rome Ụgbọ oloko
Naples ka Rome Ụgbọ oloko
Ebe Iji Rie Ice Ude Na Germany?
Fantastic ice ude bụghị ihe ọtụtụ enyi na Germany. Otú ọ dị, Ballabeni Ihe nracha bụ ebe a na-agbanwe na na ya ịrịba Scoops. Nke a pụtara ìhè ice ude parlor ice dị na Munich ma nwee ọtụtụ ihe na-esonụ. The parlor bụ nke Giorgio Ballabeni, a grandmaster na nkà nke na-eme ka ice ude. Ọ malitere na ice ude dị ka a na-enwe ntụrụndụ, na niile nke Munich bụ ekele maka ya. Ọtụtụ ndị njem na obodo n'anya ụlọ ahịa, ahapụ ya ịrịba reviews. Mgbe ị na-agbalị ha ice ude, ọ bụghị ike ịhụ ihe mere. Ha honed ha craft okè na bụ otu n'ime ndị kasị mma na ha na ubi. Ha ahuhu-abịa site ọ bụla scoop. Ihe ọzọ bonus bụ na ha nwere ha ice ude ụgbọala na ike ihe ike na onwe ọzọ!
Düsseldorf na Munich Ụgbọ oloko
Dresden na Munich Ụgbọ oloko
Nuremberg na Munich Ụgbọ oloko
Bonn na Munich Ụgbọ oloko
Ebe Iji Rie Ice Ude Na Hungary?
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ị na na isi obodo nke Hungary, eme ka n'aka gaa Gelarto Rosa. A na-eju ice ude ụlọ ahịa dị na obi nke Budapest. Ha niile bụ ihe na omenala, mmekọrịta chiri, romance, na ahuhu, nke anya na-arụ ọrụ ha. Yabụ, ha bụ ezi ndị ọkachamara na ubi. Dị ka ha ice ude, ị ga-enwe obi ụtọ na-anụ na ha na-eji nanị ndị kasị mma organic Efrata. Ukwu ọ bụla ice ude shop ezere wuru ice ude. Otú ọ dị, ihe na-eme Gelarto Rosa pụrụ iche bụ na ha ọrụ aka obibia n'ịkpụzi na ice ude n'ime a rose. Ọ bụrụ na ị na-ebi na Szent Istvan Square n'oge a na-ekpo ọkụ ụbọchị, ị ga-ejide n'aka na ị ga-ahụ ọtụtụ ndị nwere ice cream-yiri ice na-agagharị.
Ihe ọzọ ga - eleta ice cream parlor si Zurich. elu bụ ihe ice ude parlor na nwetara ya n'ike mmụọ nsọ si Argentina. The nchoputa Rofe bote biri n'ebe maka iri afọ abụọ na were na omenala. Ọ masịrị ha fruity, -enye ume ọhụrụ, na eke ice ude. Ọ bụ otú masịrị o wee bute ha na Switzerland. Taa, e nwere ihe abụọ na ụlọ ahịa na Zurich, na ha nwewa ha Argentinian mgbọrọgwụ. The na; music na Latin obi na-adị na-n'aka-ebuli gị mmụọ ọbụna ihe dị ka ị na-enwe ụfọdụ na-atọ ụtọ ice ude. Hasta bụ ihe magburu onwe ngwakọta nke Argentinian flavors na Swiss nka.
Munich na Zurich Ụgbọ oloko
Berlin na Zurich Ụgbọ oloko
Basel na Zurich Ụgbọ oloko
Vienna na Zurich Ụgbọ oloko
Ice Ude Na France
The French bụ ma ama n'ihi na a otutu ihe. Firstly, e nwere ịhụnanya ha maka nkà, ije, na nkà ihe ọmụma, nke bụ-apụghị ịgbagha agbagha. Paris bụ a ndụ Agba na. Nke abuo, ha na-ọma mara ha ịtụnanya nri. French esi n'etiti ndị kasị ukwuu gosiri na ụwa, na i nwere ike ijide n'aka na ịdọ aka ná ntị na kichin na-egosi na ha desat. N'ihi na nke a ahuhu maka nri, ọ bụghị ihe ijuanya na ha nwere ụfọdụ ndị kasị mma ice creams na Europe.
Otu n'ime ndị kasị ewu ewu na ndị bụ Berthillon. Nke a bụ otu n'ime ndị kasị ama parlors na Paris na a ezi ihe mere. Ọ e meghere na 60s na anọwo na eje ozi na-atọ ụtọ ice ude kemgbe. Ị na-free ịhọrọ otu n'ime ha na-atọ ụtọ flavors, na pụrụ ọbụna mix na dakọtara flavors iji chọta ezi n'ịgwa gị.
Ebe ọ bụla ị na-ahọrọ na-aga, ị na-n'aka na-enwe a ọma scoop nke ice ude. Dị na-echeta na-na na na enwe mma na uto mgbe ị na-eme otú. Were ya niile na na-esi ísì ịtụnanya flavors nke ice ude na ndị a dị iche iche ebe.
Amsterdam na Paris Ụgbọ oloko
London na Paris Ụgbọ oloko
Rotterdam na Paris Ụgbọ oloko
Brussels na Paris Ụgbọ oloko
Njikere na-enweta ndị na-amasị na flavors na Europe nwere na-enye? AKWỤKWỌ gị Train Tickets ugbu a. Mgbe nke ahụ mechara, you can experience the delicious world of ice cream in Europe.
Were anyị Nghoputa
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best Places Iji Rie Ice Ude Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-places-eat-ice-cream-europe/- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / de na / tr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#cooldown #icecream #traveleurope eurotrip Foodie
My blog ide bụ mfe ụzọ iji nweta ukwuu mkpa, nyochara, na professionally dere ọdịnaya, M na-agbalị ime ka ọ dị ka-ekere òkè dị ka m nwere ike ime. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m
The Ultimate Guide To Italy si Best Yoga ebe
Inzọ Njem Italytali
Gịnị Iji Lee Na Provence France
Njem ụgbọ oloko, Train Travel France, Travel Europe
Mere I Kwesịrị bụghị uche European Train Service
10 Kasị Mma ubi na Europe
10 Travel Mejọọ I Kwesịrị Zere Na Europe
Mechie a modul
Ahapụla enweghị a ugbu - Nweta Coupons na News !
Email gị johnsmith@example.com